माओवादीमा महरालाई सभामुख बन्न सकस, कस–कसले दिए चुनौती ? – www.agnijwala.com
माओवादीमा महरालाई सभामुख बन्न सकस, कस–कसले दिए चुनौती ?
काठमाडौं , २४ फागुन–नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सभामुखको उम्मेदवार छनोट गर्न सकस परेको छ । पार्टीभित्र आधा दर्जन नेताले सभामुख बन्न इच्छा देखाउँदै लबिङसमेत थालेका छन् ।
आकांक्षी धेरै भएसँगै सभामुख छनोट र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न माओवादीलाई अप्ठ्यारो परेको हो । केही समयअघि गृहमन्त्री चयन गर्न ठूलो सकसमा फसेको माओवादी केन्द्रलाई सभामुख उम्मेदवार चयन गर्न पनि उस्तै हम्मे परेको हो ।
शनिबार बस्ने संघीय संसद्को बैठकले प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन गर्नेछ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति र सभामुख एकएक पार्टीले बाँडफाँट गरेकाले सभामुख माओवादीको भागमा परेको छ । गठबन्धनका कारण वाम गठबन्धनका उम्मेदवार नै सभामुख बन्ने निश्चितजस्तै छ । италия визаluxeредактированияhhтехнический аудит сайта онлайнсмс послать бесплатно